मानविकी संकायको साख उँचो बनाउने लक्ष्यका साथ त्रिविले यही वर्षदेखि तीन वर्षे बीएको पाठ्यक्रमलाई चार वर्षे बनाएको छ। मानविकी डीनको कार्यालयले चार वर्षे पाठ्यक्रम किन र अध्यापन कसरी गर्ने भन्ने
कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य नाइके भनिएका रेशम चौधरी जेलमा छन्। चौधरी कैलालीबाट निर्वाचित सांसदसमेत हुन्। सांसद भएको एक वर्षपछि बल्लतल्ल उनले शपथ लिए, शपथ दिलाउने थिए पूर्वसभामुख महरा। अचम्मै छ,
दरबारका ज्ञानेन्द्र सर्वसाधारणसरह घरबासमा सरेको १३ वर्ष पुगिसक्यो। नागार्जुन र निर्मल निवासमा खुम्चिएसी उनको जयजयकार गर्नेहरू पनि घट्या छन्। पुत्र पारससमेत सोमरस र अन्य काण्डमा मुछिएसी दरबारका यी चर्चित पात्रको
सरकारले केही काम गरेन भन्नेहरूको मुखमा बुझो लाग्ने भएको छ। आइतबार सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्या सरकारले अब छिट्टै नारायणहिटी संग्रहालयलाई भाडामा लगाउने भा’छ। संग्राहलयभित्रको लमजुङ कक्षभित्रको डाइनिङ हल दारू–पानीसहितको
कांग्रेस सभापति देउवालाई धेरैले दाइ भन्छन्। सात दशक नाघिसके पनि अझैं सबैका दाइ र युवा नेता कहलिन रुचाउँछन्, बढ्डा। तर शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा उमेरको विषयलाई लिएर देउवा राम्रैसँग जंगिए। पाँच
रेप र र्याप दुवै अंग्रेजी शब्द। झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि, शब्दको उच्चारण उस्तै सुनिए पनि अर्थ फरक छ। अघिल्लो शब्दको नेपाली उल्था बलात्कार हुन्छ भने दोस्रो शब्द युवा र
वार्ताका लागि असमान सर्त
ताजा विद्रोही नेकपाले पूर्वविद्रोही नेकपालाई राखेको सर्त देखेर धरहरा हेरेको हेर्यै भएको छ। नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको ताजा विद्रोही नेकपाले भनेको छ, सरकारसँग वार्ता गर्न हामी तयार छौं तर सरकारले
दुर्गेश थापा, यो नामले यो वर्षका तीज गीतलाई पूरै फाँड्यो। तीज गीतमा पूरै सम्राज्य जमायो। त्यसैले छोटो समयमा उनको गीत नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डियो। दुर्गेश ब्रो नचिन्ने र उनलाई नसुन्ने बिरलै
खै त प्रमाण ?
निकै ठूलो चर्चा छिचोल्दै सोमबार नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग शिलान्यास भएको छ। पीएम ओलीले पूजापाठ गरी सुरुङमार्गको शिलान्यास गरे। शिलान्यास गर्या प्रमाण ताम्रपत्रमा बकाइदा उल्लेख छ। ताम्रपत्र चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ तोतिपाखामा सजाइएको छ।
फुट्यो देउवाको बोली
कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको बोली बुझिन्न भन्नेहरू धेरै छन्। यस्तै चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। देउवालाई आलोचना गर्नेहरू उनको बोलीलाई व्यङ्ग्यवाँण बनाउने गर्छन्–बनाउँदै आएका छन्। भन्छन्–‘केही गरी देउवाले
काठमाडौंमा जारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को यसपटकको सम्मेलन अर्थात् ‘घरेलु पिकनिक’ विशेष भएको छ। आफूलाई वरिष्ठ जेन्टलम्यान ठान्ने पिकनिक प्रतिनिधिले आफ्नो असली परिचय देखाएसी एनआरएनएको खास नाम ‘ए नारान’ राख्दा
ठूलै चर्चा बटुल्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आए। सरकारकै शब्दमा भ्रमण अत्यन्त सफल भएको छ, ऐतिहासिक भएको छ, देशको इज्जत प्रतिष्ठा उच्च भएको छ। संसारले चिनेका सी नेपाल आएसी
‘वर्मा गयो कर्मसँगै’ भन्ने नेपाली उखान राजधानीको पाँचतारे होटेल हायातमा चरितार्थ भएको छ। उखान चरितार्थ भएको मिति हो– मंगलबार २८ असोज, अर्थात् हिजो। पाठकलाई लाग्यो होला, गैरआवासीय नेपालीहरूको संघ एनआरएनएको
शीर्षक पढेर पाठकले कृष्णबहादुर महरालाई सम्झिनुभयो होला, हो ? यदि हो भने तपाईं आंशिक मात्र सही हुनुहुनुहुन्छ। किनभने शीर्षकमा ‘नेताहरू’ भनिएको छ, महरालाई मात्र सम्बोधन गर्दा ‘हरू’ भन्नुको के खाँचो
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको एयर चाइना चीनतिर सोझिँदानसोझिँदै आइतबार नेपाली नागरिक सेल्फी खिच्न तँछाड मछाड गर्न थाले। यो दृश्य देखेर धरहरा निकै रमायो– आखिर राजधानीको चोक–चोकमा थुपारिने फोहोरका डंगुरसँग
दारुमै छ दम
भगवान् श्रीकृष्णका १६ हजार गर्लफ्रेन्ड थिए। जो सँग मन लाग्यो उनी उहीसँग डेटिङ जान्थे, मस्ती गर्थे भन्ने कुरा हिन्दू धर्मग्रन्थमा छेलोखेलो सुन्न पढ्न पाइन्छ। श्रीकृष्ण भगवान् भएकाले उनले गर्या डेटिङ
नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भा’छ। यो मामिलामा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक रे। खेत, बारी, झाडी, बुट्यान, खुला पाखा, चौर, गल्ली र टोल बस्तीमा घोप्टेमुन्टो लगाउँदै सट्याकसुटुक बिस्ट्याउने मनुवा देखिन्न,
एकथरि लालबुझक्कड देखेर धरहरालाई झनन्न रिस उठ्छ, जो भन्छन्– ‘बजारमा किन यत्रो भीड गरेका मानिसले, फुटपाथ र खुला बजारतिर पाइला राख्ने ठाउँ छैन, यही बेला भिडमभीड गरेर किन महँगो र
कृषि विकास बैंक यतिखेर कसरी डेढ करोड रुपियाँ ह्याक गरेर लुटियो भनेर अनुसन्धान गर्दै छ। उसले विज्ञहरूसँग सोधखोज भइरहेको जनाएको छ तर अझै यसैगरी लुटियो भन्न सकेको छैन। धरहरा निःशुल्क
लक्ष्मी कि सरस्वती ?
केही समयअघि एकजना मित्रले धनसम्पत्तिको निकै नै चुरीफुरी गरिन्। ‘दुई–दुईवटा घर छन् शहरमा, अझ अरू दुईटा बनाउँदै छु’ भनी खोक्न भ्याइन् पनि। यो बबुरो अनपढ धरहरा आफू ठडिन नसकेमा घोसेमुन्टो